သြစကြေးလျားရောက် မြန်မာများသို့ ~ Nge Naing
Wednesday, September 08, 2010 Nge Naing5comments
လာမည့် ၁၂.၀၉.၁၀ ရက်၊ တင်္ဂနွေနေ့မှာ Australian Burmese Community Development (ABCD) Network မှ ကြီးမှူးပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ် ဆိုက်ကလုံးမှုန်တိုင်းကြောင့် မိဘမဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေပွဲတခုကို ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ လူအစည်ကားဆုံးနေရာ တခုဖြစ်တဲ့ Darling Harbour မှာ မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲနဲ့ အစားအစာ ရောင်းချပွဲ ပြုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အချိန်က မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပွဲတော်ကို ဒီမှာ နမူနာအဖြစ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်က ပိုစုံတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်နယ်နဲ့ ကမ်ဘာရာ၊ မဲလ်ဘုန်းလ်၊ ဘရင့်စဘိန်းတို့က မြန်မာတွေ အားလုံးကို လာရောက် လည်ပတ် ကြည့်ရှုအားပေး ၀ယ်ယူ စားသောက်ကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။
September 9, 2010 at 7:37 PM Reply
September 9, 2010 at 10:33 PM Reply
September 11, 2010 at 4:54 AM Reply
You are the only one deserving to debate with military officers in killer army from Russia. Not only debate but also wearing Longyi.
September 11, 2010 at 10:51 AM Reply
ဇော်မျိးကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ Comment နေရာမှာ ရေးခွင့်မပေးဘူး။ C-Box မှာပဲ ရေးခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကိုလည်း ဘယ်သူမှ အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့။ ဒီပို့စ်ကလည်း ဆစ်ဒနီမှာ လုပ်မည့် Fundraising အတွက် Culture show မှာ လူများများလာစေချင်လို့ ကြော်ငြာထားတာသာ ဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်ထဲက စစ်သားတွေက အရပ်သားကို သတ်တဲ့အမှုနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့အတွက် မဆိုင်တာတွေ လာမရေးဖုိ့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။
September 11, 2010 at 2:13 PM Reply
ဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကို ဘယ်သူမှ အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့။ ကျွန်မ အားတာနဲ့ ဖျက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဇော်မျိုးရေ ငယ်နိုင်ဘလော့ဂ်မှာ မရေးရမနေနိုင်ဖြစ်နေရင် ဒါမှမဟုတ် လစာမရဘူးဆိုရင် C-Box မှာရေးလို့ ပြောပြီးပြီ။ အမြဲတမ်း အမှတ်တရ ကျန်နေမယ့် မှတ်ချက်နေရာမှာတော့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကို မသိမ်းထားနိုင်ပါဘူး။